Ikhulu laElgar lisuse ukucasuka kwakhe
CAPE TOWN, SOUTH AFRICA - JANUARY 02: Dean Elgar of the Proteas celebrates his century during day 1 of the 2nd test between South Africa and Sri Lanka at PPC Newlands on January 02, 2107 in Cape Town, South Africa. (Photo by Carl Fourie/Gallo Images)
Ovulela amaStandard Bank Proteas, uDean Elgar, kumjabulisile ukuthatha ukucasuka kwakhe okwadalwa ukungaqhubeki kahle uma eqale umdlalo kahle, ngokuthola ikhulu elibe i-career-best yakhe osukwini lokuqala lomdlalo weSunfoil Test bedlala neSri Lanka ePPC Newlands eKapa ngoMsombuluko.
Lomdlali oneminyaka engu-29 ushaye isikhathi esidlule amahora ayisithupha ukuhlanganisa ama-runs angu-129 (230 balls, 15 fours), okube ikhulu lesithupha kumsebenzi wakhe, njengoba iqembu lasekhaya liqede usuku liku-297/6.
Kumenze wakhululeka lomdlali oshaya ngesandla sokunxele, ovuma ukuthi ukungaqhubeki kahle kujwayele ukumcasula.
“Ngijwajele ukuthola ikhulu ekuqaleni kwe-series bese ngingaqhubeki kahle – ngithola o-20, o-30 no-40 abangasile, futhi abacasulayo,” kusho uElgar, owenze u-45 no-52 kwiTest yokuqala ePort Elizabeth.
“Ngiyazi ukuthi akusona isimilo sami,” esho eqhubeka. “Ngaxoxa nomqeqeshi wamaTitans (uMark Boucher) futhi ngathola ulwazi kubadlali abangekho eqenjini lethu.”
uElgar uphinde wancoma i-wicket yaseNewlands, ebukeke inikela okuningu kubaphosi futhi eyenza ukushaya kubukeke kunzima ngosuku lokuqala. iSri Lanka ibinqobe i-toss ekuseni kunamafu futhi yakhetha ukuphosa kuqala.
“Besazi ukuthi uma sidlula kwihora lokuqala, uma ibhola elisha seliqala ukuguga, lizosinika amathuba ambalwa okuthola ama-runs,” esho echaza uElgar. “I-wicket encomekayo. Uma uzinikela nge-bat, kukhona ozokuthola futhi uma wenza okufanayo ngebhola, ozothola nalapho. Sadlala kahle ePE futhi ibukeka iyinhle nayo le.”
Ngaphandle kwekhulu lika-Elgar, amaProteas abukeke esenkingeni emuva kwetiye njengoba bazithole beku-159/5, kodwa i-103-run partnership phakathi kwaElgar noQuinton de Kock ishintshe ukuhamba kosuku lokuqala.
u-Elgar uphume kusele imizuzu engu-30 ukuthi uvalwe umdlalo, uDe Kock ebesakhona eno-68 (90 balls, 7 fours) futhi uzothwala ithemba leSouth Africa lokuthola umphumela we-innings yokuqala oqinile, kuyela osukwini lesibili.
“uQuinny (de Kock) ungoyedwa abamangalisayo kwikhilikithi yomhlaba,” esho enezezela. “Indlela adlala ngayo ngeke ishintshe kakhulu. Ufaka abaphosayo ngaphansi kwengcindezi. Bajwayele ukucabanga ukuthi bangaphezu kwakhe kodwa kulandela ngokuthi bazisule izinyembezi futhi yena eseno-50. Ungoyedwa walaba abakwaziyo ukubulala adlala nabo uma esezimisele,” esho evala uElgar.
Usuku lwesibili luzoqhubeka ngo-10:30 futhi ungalibuka kuSuperSport 2, kuSABC 3 noma ulalele kuRadio 2000. Amathikithi ezinsuku ezisele zomdlalo weTest ayatholakala enkundleni naku www.ticketpro.co.za.